थेरापीको रूपमा बिनौराल बीट्स प्रयोग गर्ने फाइदाहरू - दिमाग जीवितै - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
यदि तपाईं चिन्ता, उदासिनताबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, अनिद्रा, वा यदि तपाईंसँग छ एडीएचडी, तपाइँ लाई बिनौरल बीट्स भनिन्छ केहि बाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यो एक प्रकारको चिकित्सा हो जसमा ध्वनि तरंगहरूको प्रयोग समावेश छ। यो अद्वितीय छ कि यो एक श्रव्य ढाँचामा वितरित छ। धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई ध्यानको साथ मद्दत गर्न, उनीहरूको दिमाग केन्द्रित गर्ने, वा आफैं शान्त हुने अनुमतिको लागि प्रयोग गरे। प्रभावकारी रूपमा, यो तपाईंको श्रवण प्रणालीको लागि तपाईंको दिमाग सिnch्ख्रोनाइज गर्ने एउटा तरिका हो ताकि तपाईं यी सबै वा सबै मुद्दाहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस उपचार के हो र तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न किन विचार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे द्रुत सिंहावलोकन हो।
को एक सिंहावलोकन Binaural बीट्स
प्राय जसो केसहरूमा तपाईले हेडफोन लगाउनु पर्छ। जहाँसम्म, तपाईसँग तपाईको बायाँ र दायाँ स्पिकरहरू हुन सक्छ। एक बर्षमा, तपाईले एउटा आवाज सुन्नुहुनेछ। अन्य टोन समान हुनेछ, तर फ्रिक्वेन्सीमा अलि फरक हुनेछ। जब मस्तिष्कले यी दुई टोनहरू प्रक्रिया गर्न कोशिस गर्दछ, यो एक प्रकारको सिnch्क्रोनाइजेसन हुँदै जान्छ। ध्वनिहरू सन्तुलित गर्न कोशिस गरेर, तपाईं आफ्नो मस्तिष्कको विद्युतीय कम्पोनेन्टहरू एकै साथ सिंक्रोनाइज गर्न को कारण हुनुहुन्छ।
किन यो निश्चित चिकित्सा अवस्थाहरूको लागि उपयोगी छ?
त्यहाँ धेरै सर्तहरू छन् जुन यसले सहयोग गर्न सक्दछ। अध्ययनहरूले देखाए कि यसले चिन्ता कम गर्न, तनाव कम गर्न, फोकस बढाउन, तपाईंको मुड सुधार गर्न, तपाईंलाई आराम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, र रचनात्मकतालाई बढावा दिन पनि सक्छ। केहि व्यक्तिले यसलाई आफ्नो दुखाई प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्दछन्, र चीजहरू याद गर्न वा सम्झनको लागि तिनीहरूको क्षमता सुधार गर्न पनि मद्दत गर्दछ। यो सबै सम्भव छ किनकि तपाईको दिमागका दुबै गोलार्ध एकै साथ मिलेर काम गरिरहेको छ। यो गर्न सक्षम छ किनकि धेरै जसो समस्याहरू मानिस जस्तो ती तनाव, वा यदि तपाईंसँग छन् भने एडीएचडी, दिमागमा सन्तुलनमा रहेको विद्युतीय परिणाम हुन्। फार्मास्यूटिकल्स शरीरमा सेरोटोनिनको उत्पादन, वा अवधारणालाई उत्तेजित गर्न प्रदान गरिन्छ। सेरोटोनिनले तनावको स्तर कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ, र एक उत्पादनको रूपमा, तपाइँको मस्तिष्क छालहरू पनि सिnch्क्रोनाइज हुनेछ। यी दुई टोनहरू सुनेर, तपाईं प्राय: फार्मास्यूटिकल उपचारको आवश्यकतालाई बाइपास गर्न सक्नुहुन्छ जुन उही अन्तिम परिणाममा डोर्‍याउँछ।
के यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईंले दिनहुँ प्रयोग गर्नुपर्नेछ?
धेरै चलाख मानिसहरूले आरामको संगीतमा यी दुई टोनहरू समाहित गर्न सक्षम भएका छन्। तपाईं दिनभर पृष्ठभूमिमा यो खेल्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा, यो लामो सुन्न को लागी लामो सम्म, यो मस्तिष्कलाई यी परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गर्दछ। केहि व्यक्तिले हेडफोन लगाउन रुचाउँदछन् जब उनीहरू अफसेट टोनहरू सुन्छन्, जबकि अन्यले उनीहरूको कारमा वा बाहिर पनि स्पिकरहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ जब हेडफोन लगाएर जुन अन्य सबै आवाजलाई रोक्दछ, तपाईंलाई यी डुअल टोनको पूर्ण लाभ प्राप्त गर्न अनुमति दिनेछ जुन अलि अफसेट छ।
यदि तपाईंसँग उल्लेख गरिएको कुनै पनि मुद्दाहरू छन् भने, बाइनरल पिटहरू तपाईंको लागि समाधान हुन सक्छ। तपाईले यो महसुस गर्न सक्नुहुन्न कि तपाईले पहिले भन्दा राम्रो कार्य गरिरहनु भएको समय सम्म यो कत्ति लाभदायक हुन्छ। यदि तपाईं प्रत्येक दिन यी टोनहरू सुन्नुहुन्छ, र तपाईंसँग अचानक अधिक ऊर्जा छ, वा तपाईं कम विर्सनुभएको छ, यो यस टेक्नोलोजीको उप उत्पाद हुन सक्छ। तपाईं या त यी टोनहरू नि: शुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ, वा तपाईं यस प्रविधि प्रयोग गर्ने उत्पादनहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, तपाई चाँडै नै राम्रो हुनुहुनेछ तपाई पहिलेको दिन भन्दा पहिले तपाईको दैनिक जीवनमा यी दोहोरो टोनहरू समावेश गरेर।